कोरोना महामारी: धेरैले सोच्ने यी प्रश्न
जनतापाटी शनिवार, श्रावण १७, २०७७, ०६:४७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौंका नाका सिल वा कडाइ गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?
लकडाउनमा नाका सिल तथा कडाइ गरेर हेरिएको हो नि ! होइन र ? उपत्यका छिर्ने चारवटै नाका बन्द वा आउजाउमा कडाइ गरेर समस्या हल हुँदैन। आवतजावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता नागरिकले पाउनुपर्छ। त्यसैले आवतजावतलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।
आवतजावतलाई कसरी व्यवस्थित पार्ने ?
नाकामा आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। पीसीआर परीक्षण गर्न स्वाब नमुना लिनुपर्छ। रिपोर्ट नआउँदासम्म होल्डिङ सेन्टरमा राख्नुपर्छ। रिपोर्टमा पोजिटिभ आएको छ भने अस्पताल लैजानुपर्छ। नेगेटिभ आए होम आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गर्नुपर्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कस्तो अवस्थामा गर्ने ?
कोरोना पोजिटिभ देखिनेबित्तिकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लाग्नुपर्छ। केस देखिएको ठाउँ वरिपरि एवं पोजिटिभ व्यक्तिसँग उठबस भएकाको खोजी गरिहाल्नुपर्छ। यी सबै पक्ष केलाएर शंकास्पद व्यक्तिको पनि स्वाब नमुना संकलन गर्नुपर्छ। कुन–कुन पेसाकर्मी उच्च जोखिममा छन् ?
स्वास्थ्यकर्मी, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी, सेना, पत्रकार, बैंकका कर्मचारीलगायत फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति उच्च जोखिममा पर्छन्। त्यसबाहेक सवारीचालक, सैलुन, ब्युटिपार्लर, तरकारी एवं पसल सञ्चालक पनि जोखिममै पर्छन्। जुनसुकै पेसाकर्मी जुनसुकै अवस्थामा पनि जोखिममा छन्। कार्यालयमा कस्तो सुरक्षा अपनाउने ?
कार्यालयमा प्रवेश गर्नुपूर्व कर्मचारीको तापक्रम नाप्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। मास्क प्रयोग गर्न लगाउनुपर्छ। भीडभाड गर्नु हुँदैन। सहकर्मी वा सेवाग्राहीसँग दुई मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ। कर्मचारीबीच पनि सेड्युल व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सेवाग्राहीलाई पनि स्थान तोकेर सेवा दिन सकिन्छ ।
मास्क लगाउन हेलचेक्र्याइँ देखिन्छ। के गर्ने ?
मास्क प्रयोग दुई किसिमबाट बढाउन सकिन्छ। पहिलो, जनचेतना फैलाएर। कतिपयले आफैं किनेर मास्क लगाएका छन्। मास्क किन्न नसक्नेहरूलाई सरकारले वितरण गर्नुपर्छ। यसो गर्दा पनि हेलचेक्र्याइँ गरे कारबाही गर्नुपर्छ।
पीसीआर परीक्षण बढाउन कति आवश्यक छ ?
सुरुदेखि नै पीसीआर परीक्षण बढाउनुपथ्र्यो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा परीक्षण विस्तार गर्नुपर्छ। सुरुमै पीसीआर परीक्षण गर्दा पनि हुन्छ, सरकारलाई खर्चिलो पनि हुँदैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान अमेरिका भ्रमणमा, ट्रम्पसँग भेटवार्ता गर्ने आइतवार, श्रावण ५, २०७६, ०४:४०:००
मतदाता परिचयपत्र वितरण कार्य शुरु बिहिवार, मंसिर १२, २०७६, ११:३३:००
‘लकडाउन सरकारलाई होइन, जनताको जीवनका लागि’ - प्रधानमन्त्री ओली 'लकडाउन एउटा विधि हो । यो सरकारलाई चाहिएको विषय होइन । हामीले सामाजिक दूरी कायम, मास्क लगाउनेलगायत अरु उपाय पनि गरिरहेका छौँ । परिस्थिति हेरेर स्थिति सहज भएपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधि क्रमशः अगाडि बढ्नेछन् । कोरोनाका कारण उत्पन्न आतङ्क समाप्त पार्नुपर्छ । कतिपय मुलुकमा हामीले देख्यौँ, बाकसमा लगेर लाशमाथि लाश पुरिएको छ । के हामी पनि खाल्डोमा लाशमाथि लाश पुरिएको हेर्न चाहान्छौँ ? यसले आतङ्क सिर्जना भएमा त्यसले ल्याउने डिप्रेशन र क्षतिको आँकलन गरेका छौँ ?...' आइतवार, बैशाख ७, २०७७, १०:३७:००